Somalia oo illaa Xalay aysan shaqaynayn Qadadka Internet-ka. – Hornafrik Media Network
Somalia oo illaa Xalay aysan shaqaynayn Qadadka Internet-ka.
By HornAfrik	 On Jun 25, 2017
Internet-ka ayaa la xaqiijiyay in illaa iyo Xalay uu ka go’an yahay Magaaladda Muqdisho, Waxaana uu qadka ka baxay Internet ka Somalia Xalay 9:00 Fiidnimo, siday u xaqiijiyeen Hornafrik Shirkadaha bixiya Internet-ka ee Somalia.
Ma jiro illaa iyo hadda wax war ah oo ay ka soo saareen arrintan Wasaaradda Boostadda iyo Isgaarsiinta Dawladda Somalia iyo Shirkadaha bixiya Internet-ka. Waxayse Saraakiil codsaday inaan Magacooda la shaacin sababo la xiriira iyagoo aan oggolaansho u haysan inay la hadlaan Warbaahinta ay u sheegeen Hornafrik in Xalay Qadka Internet ka Somalia oo soo mara Badda uu Cable kii go’ay. taasoo ay ku macneeyeen inuu sababay Markab marayay Badwaynta.
Iddaacadaha iyo TV yadda Muqdisho ayeey saamayn ku yeelatay Internet la’aantu. Ma jiro wax warar iyo Barnaamijyo ah oo ay ka soo gudbinayeen illaa iyo Xalay Muqdisho. iyadoona TV yadda inta badan Wararka laga akhrinayay Maanta Xarumahooda London iyo Nairobi, waxaan iyana meesha ka baxay Wararkii Internet ka ay ka soo gudbin jireen Iddaacadaha Maxaliga ah ee Muqdisho.
Shirkadaha Xawaaladaha ayaa iyaguna ay saamaysan Internet la’aantan. waxaana gabi ahaanba meesha ka baxay Adeegyaddii ku xirnaa Internet-ka.
Shacabka Muqdisho oo Maanta oo kale Sawiro badan soo dhigi lahaa Internet-ka oo ay ku muujinayaan Farxadda Ciidda ayaan haysan wax qad ah. Waxaana adkaaday Xiriirka xittaa Eheladda kala jooga Somalia iyo Qurbaha oo markii hore ka sheekaysan jiray Qadadka Internet-ka si lacag La’aan ah.
Isticmaalka Internet-ka ayaa Somalia Sannadihii ugu dambeeyay kor u kacayay. Waxaana uu qayb ka noqday Adeegyadda lagama maarmaanka u ah Shacabka. iyadoona lagu qiimeeyo Bulshadda Isticmaasha Internet-ka ee Somalia inay gaarayaan 60%, inkastoo Qiyaasta ay intaas ka badan karto ama ka yaraan karto. maadaama aysan jirin Daraasaad Rasmiya.
Xafiiska Hornafrik ee Muqdisho oo isna Maanta Bulshadda u qorshaynayay inuu Damaashaadka Ciidda ugu soo tabiyo si toos ah ayeey saamayn ku yeelatay Internet la’aanta.
Dawladda Somalia oo ku tilmaantay Goobihii la weeraray Ramadaanka inaysan ahayn kuwo Istaraatiiji ah.
Somalia oo sheegtay inay Muhiim u tahay Saldhiga Milatari ee Turkigu ka furanayo Muqdisho, xilli lagu gorgortamayo in la xiro Saldhiga ay ku leeyihiin Qadar.